प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७८, शनिबार १८:११
काठमाडौं, २ असोज । सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेता तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकार असफल नभएको दाबी गरे । उनले भने,‘यो सरकार खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले ६६ दिनमा गर्नुपर्ने काम गर्नुभयो । कति गर्ने ? एउटा राम्रो काम भनेको ओलीजीलाई हटाईदियौं । उहाँलाई हटाएसँगै प्रतिगमन सच्याउने काम भयो । प्रधानमन्त्रीले कोभिड १९ उपचारमा तिव्रता गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन ढिलाई भनेर तपाईँहरुलाई किन टाउको दुखाई ? सरकार त चलिरहेको छ । सानो मन्त्रिमण्डल हुँदा किन टाउको दुखाई ?’
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमसीसीबारे अध्ययन गरेर सशोधन गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने कुरा बाहिर आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले एमसीसी नेपालको हित हुनेगरि पारित हुने विश्वास दिलाए । तर, उनले एमसीसी सदनमा आउने विषय नभएको जिकिर गरे ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफूहरु पनि संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको सुनाए । उनले भने–‘भारतको संविधान १०५ पटक संशोधन भयो । अमेरिकाको संविधान ११३ पटक सशोधन भयो । संविधान भनेकै समयानुकुल बनाउने कुरा हो । यो समयसापेक्ष कुरा हो । संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने दल पनि चुनाव लडेर आए ।’
उनले आफूहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा नछोडेको पनि जिकिर गरे । संविधान जारी गर्नको लागि कांग्रेससँग सहमति कायम गर्न त्यो मुद्दा थाँती राखेको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘कांग्रेससँग सहमति नहुने भएपछि कार्यकारी राष्ट्रपति भएन । हामीले पदसँग साटेको होईन । ओलीको कारण देशमा लफडा सुरु भयो । प्रतिनिधिसभा भंग बेठिक थियो भनेर सर्वोच्चले भन्यो । ओलीलाई आपत अहिले के परेको छ, संसद् चल्यो भने ओलीजीको राजनीति सिद्दियो, त्यसैले उहाँ जे गर्दा संसद् चल्दैन त्यही गर्नुहुन्छ ।’
उनले एमाले सांसदहरुले मर्यादापालकको टाउकोमा चढेर, फोहोर पनि गरेर, टोकिदिएर गलत काम गरेको टिप्पणी गरे । तर, यो हर्कतको नाईके केपी ओली भएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘सभामुखलाई माईक हान्ने हाम्रो योजना थियो भनेर सांसदले भन्नुभयो, तर केपी ओलीले यस्तो तयारी थिएन भनेर भन्नुभयो, त्यसो हो भने खोई त अनुशासनको कारबाही ?’
उनले बजेट होलिडे भएर के भएको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘अब केही दिनमै होलिडे खुल्छ, बजेट पारित हुन्छ। अध्यादेश ल्याएर विचल्ली पारेको केपी ओलीले हो । दर्जनौं अध्यादेश ल्याएका ओलीको विरुद्धमा हामीले एक अध्यादेश ल्याएको, ओली ड्याम्मै ढले ।’ उनले वर्तमान संविधान बेठिक नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘यो संविधान उपयुक्त छ । ठीक छ । संशोधन हुँदै जान्छ । नेपालको संविधान पनि संशोधनयोग्य छ । तर, यो राम्रो छ । संसारमै यति धेरै महिला अधिकार भएको संविधान विरलै छ । अमेरिका र भारतमा छैन् ।’
उनले संसद् अवरोध गर्ने काम नगर्न पनि एमालेलाई र यसका अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘उहाँको चेत खुलोस । फेरि अध्यादेशको राज हुन्छ । संसद् चल्न दिईएन भने अध्यादेश आउँछ । संसद् विघटन गर्ने र चल्न नदिने मान्छे एउटै हो–केपी ओली । उहाँले माधव नेपाललाई हटाएपछि मात्रै संसद् चल्न दिन्छु भन्ने होला, अब माधव नेपालले ओलीविरुद्ध राज्यविद्रहोको अपराधको मुद्दा नहालेसम्म म पनि संसद् चल्न दिन्न भन्नुभयो भने के हुन्छ ?’